Qodobbada Frank Bria ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Frank Bria
Frank Bria waa Khabiirka Adeegyada Tigidhada Sare. Wuxuu bilaabay xirfaddiisa ganacsi ee qaybta tikniyoolajiyadda adeegyada maaliyadeed. Wuxuu la soo shaqeeyay dhowr shirkadood oo bilow ah, qaar wuxuu ku iibinayay boqolaal milyan oo doolar, qaarna wuxuu ku dhacay olol. Khibraddiisa waxaa ka mid ah caawinta qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee 5 qaaradood kobciya ganacsiyadooda iyagoo saameyn dhab ah ku yeelanaya macaamiishooda - taasna u beddelaysa wax la bixin karo.
Hadda wuxuu u weeciyaa khibraddaas waaxda ganacsiga yaryar. Wuxuu la shaqeeyaa la taliyayaal, bixiyeyaasha adeegga ganacsiga, iyo khubaro kale si looga fogaado “mashruuc ku saleysan” iyo dakhliga saacadlaha ah - asal ahaan ganacsiga waqtiga loogu talagalay lacagta. Macaamiisha Frank waxay ganacsiyadooda ku dhistaan ​​adeegyo wax soo saar leh oo aad waqtigaaga uga faa'iideysanaysid macaamiil badan - oo aan ahayn mid keliya.
Isagu waa qoraaga buugga caalamiga ah ee iibka Miisaanka: Sida Loo Kobciyo Ganacsigaaga Adoo Shaqeynaya Wax Yar. Wuxuu ku nool yahay Gilbert, Arizona oo ku taal aagga Phoenix isaga iyo xaaskiisa iyo 3 gabdhood.
Soo Degso Buugga Frank ee Ebook: Dhisida Ganacsi Adeeg: 3 Khuraafaad Oo Adiga Ku Sii Jabinaysa
Ku Iibinta Khadka Tooska ah: Soo helitaanka Waxyaabaha Soo Kordhinta ee Iibsashadaada
Axad, Janaayo 8, 2017 Axad, Janaayo 8, 2017 Frank Bria
Mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee aan maqlo ayaa ah: Sidee ku ogtahay farriinta loo adeegsanayo bogga degitaanka ama ololaha xayeysiinta? Waa su’aal sax ah. Farriinta khaldan ayaa ka adkaan doonta qaabeynta wanaagsan, kanaalka saxda ah, iyo xitaa bixinta badan. Jawaabtu waa, dabcan, waxay kuxirantahay halka ay rajadaadu tahay meertada iibsiga. Waxaa jira 4 tallaabo oo waaweyn oo ah go'aan kasta oo iibsi ah. Sidee ku ogaan kartaa halka ay rajadaadu tahay